GoWikipedia - Portal:Saynis
Bogga Hore Sayniska Dabiiciga Sayniska bulshada Cilmiga nolosha Dabagal
Saynisku waa cilmi kasta oo la xaqiijin karo, iyadoo la adeegsanayo tijaabo sayniseed. Xaqiijintiisuna kuma xirna goob, xilli, sidoo kalena sayniska iyo saynisyahanku wax xiriir ah malaha! waa wax kasta ee ku saabsan aqoon iyo dhaqan gelin:-
Saynis ku dhisan qeexitaan iyo ulajeeddo Sida Fiisigis
Mid ku dhisan Khibarad ee laga qaatay dabiicadda
Tusaale: Haddii la doonayo in la xaqiijiyo in biyuhu samaysmeen ka dib markii labo curriye (labo atam oo Haydrojiin ah iyo Hal atam oo Ogsijiin) ay falgaleen, sida ugu fudud ee loo xaqiijin karo waa in la soo qaataa labadii curriye, ka dibna la falgeliyaa!! maxsuulka mar walba ka soo baxaya tijaabadaas waa "biyo". saynisku waa cilmi ka madax bannaan dhaqanka ay bulsho leedahay iyo waxa ay aaminsan tahay.
- Tirada maqaallada ku saabsan saysiska ee insaykolobeediyaha ilaa iyo hadda wuxay gaartay -
Arag mid ka mid ah
Curiye kimiko waa macdan, kimiko adke, hawo ama dareere ah kuwaas oo laga helo meelo kala duwan oo dhulka ah. Sida la ogyahay, ilaa hada waxaa jira 118 Curiye, kuwaas oo ku xusan miiska Diwaanka Curiye. Intaas waxaa dheer, ayadoo lagu saleeynayo calaamadaha iyo dhaqanka curiye ayaa wuxuu u kala baxaa qeeybo badan oo, guud ahaan, soo hoosgala Bir (metal) 91 curiye, Bir la Mood (metalloid) 6 curiye, Bir Ma Ahe (nonmetal) 17 curiye, iyo Neefo.
Sida caadiga ah, curiye waa walax kimiko oo ka samaysan atom taas oo lagu kala saaro tirada atomic ee bu'diisa ku jirta - tirada borotoono ee bu'da atom. Guud ahaan, waxaa curiyaha loo qeybiyaa sadex nooc: Bir, Bir la Mood iyo Bir Ma Ahe. Tusaale fiican waxaa ah, Ogsajiinta iyo Nitrojiinta (Bir Ma Ahe), Silikoonta iyo Aarsenik (Bir La Mood), iyo Aayronta, Naxaasta, Dahabka iyo Koberta oo ah bir. Curiyaha kimiko waxaa ugu miisaan fudud Haydarojiinta oo leh tiro atomic 1 iyo tan ku xigta Hiliyaamta oo leh tiro atomic 2. Sidoo kale, labadan curiye waa kuwa ugu badan Koonka; halka Aayron iyo Ogsajiintu ay yihiin labada ugu badan qaab-dhismeedka qolofta dhulka. Inkastoo macdanta iyo isku dhisyada curiyaha qaarkood dadku aqoon u lahaayeen tan iyo 10,000 sano ka hor, inta u badan curiyayaasha waxaa la helay dhamaadkii qarnigii 19aad iyo qarnigii 20aad.
Sii aqri • Kayd
Neefta gibilka hawada ama atmoosfeerka ee dhulka waxa ay soo dirtaa ilays buluug ah in ka badan kuwa kale ee mowjadahooda, waxa ay dhulka siisaa neecaaw buluug ah marka laga eego hawada sare.
- Kayd -
⇧ ✎ 👈 Portal:Saynis/Ma ogtahay/2
Shaqsi xul ah
Ibn Haytham Waa aqoonyahan Muxamed bin Xasan bin xuseyn bin Heytham Abuu Cali Albasri 965-1039, waa caalim Muslim ah kaas ku caan baxay aqoonta Xisaabaadka, Araga ( Optics ), Ingineernimada.
► Bahda Bisada
► Bahda Midaysay Qoraxdu
► Cilmi Falag
► Cilmi Fallag
► Cilmiga bulshada
► Cilmiga Xidigaha
► Jaamacada Camuud
► Leeb iyo Qaanso
► Portal Saynis
► Qeybaha Geedka
► Ugaadhsi iyo Qadhaabsi
Sayniska dabiiciga iyo Xisaabta:
Cilmiga nolosha: Cilmiga nolosha • Badaha
Cilmiga caafimaadka: Caafimaad
Cilmiga fiisikiska: Baayooloji (Fiisikis) • Kimistari
Xisaab • Tirakoob
Cilmiga bulshada: Dhaqaalaha
Farsamo: Beeraha • Tamar • Diyaaradaha
Qodobbo ka mid ah Sayniska
Qodobbo ku jira laamaha Sayniska
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal:Saynis&oldid=169531"
Bogag adeegsada tusmada iskuraran
Bogaga adeegsada tusmada iskuraran2
Bogaga adeegsada tusmada tiro iskuraran